U-Emtee ugxeka ukungaphakanyiswa kwegama likaNasty C kowama-SAMA | News24
U-Emtee ugxeka ukungaphakanyiswa kwegama likaNasty C kowama-SAMA
Johannesburg – Sekuzophela unyaka uNasty C akhipha ingoma eshisa bhe ethi-Juice Back nokuyinto emakhele elikhulu isasasa kubalandeni bomculo we-Hip Hop waze wathatha nomklomelo we-Best Newcomer kuma-SA H-p-Hop Awards, kubika iTimeslive.
Yize ukhula umsebenzi wakhe embonini yezomculo kuyabonakala ukuthi lo mrepha wavalelwa ngaphandle kuma-Metro FM Awards ekuqaleni kwalo nyaka njengoba sekumphinda lokho kowama-SAMA.
OLUNYE UDABA:Bavuke umbhejazane abalandeli baka-Emtee engafiki emcimbini
Umngani wakhe omkhulu u-Emtee uthi umsebenzi kaNasty C muhle kakhulu ukuthi angangaqokelwa ama-SAMA.
“Ngicabanga ukuthi uNasty C ufanele ukuhlonishwa ngomsebenzi wakhe, kumele ngabe igama lakhe liphakanyisiwe ukuqokelwa le ndondo. Nginesiqiniseko sokuthi ungumrepha osebenza ngokuzikhandla,”kusho lesi sihlabani seculo i-Roll Up, u-Emtee.